Ny endriny sy ny maha-eo amin'ny tsenan'ny tokantrano - amin'ny sambokely iray?
Ny endriny sy ny tarehiny eo amin'ny tsena
Ahoana no fomba ahazoako mandeha tsara?
Marina aloha, tsara daholo?
Ny isan'ireo singa kokoa no ambony kokoa noho ny hatramin'izay. Ny iray dia manana fahadisoam-panantenana ao ambadik'izay, ny fanambarana hafa ihany koa. Maro koa no tsy manambady na tsy manana afa-tsy fotoana sarotra amin'ny olona iray. Mihamaro hatrany ireo singleses manandrana ny fomba fitaterana maoderina amin'ny alalan'ny aterineto. Sarobidy kokoa noho ny hatramin'izay ny tranonkala mampiaraka.
Andramo indray mandeha izao
Tamin'ny voalohany, ny fikarohana ny "halavany faharoa" dia nanjary sarotra kokoa ary tamin'ny ankapobeny dia voafetra ny toeram-piasana na ny faritr'ireo namana, amin'ny alàlan'ny aterineto, dia betsaka ny zavatra azo atao ankehitriny. Na dia ilay tovolahy saro-kenatra aza, fa saro-kenatra, dia efa nahita azy - indrindra no voatahiry - Dulcinea.
Fa ny clientele 55 + sy ny OMpiara mihitsy ho an'ny olona be atao Shy na toy ny mpitantana, tena-miasa, izay maka fotoana kely na fironana mba hivoaka, nampanantena fahafahana vaovao efa niloa-ny noho ny tolotra aterineto mampiaraka. Izay sprightly 60 taona ny lahateny efa manana ny vehivavy iray tao an-kafe trano? Misaotra ny aterineto, na dia azo atao aza izany. Efa hatry ny ela, tsy mila miandry ny fifandraisana intsony ny vehivavy, fa mahazo miditra amin'ny tenany ihany.
Amin'ny tena fiainana, ny fahafaha-misakafo iray, ohatra, dia mihaona sy tia mpikarakara marobe, nefa tsy dia mitombina loatra amin'ny tombontsoa ara-kolontsaina mitovy, dia saika zero. Ny aterineto no mahatonga izany!
Sarotra ny mitady ny mpiara-belona marina raha tsy misy aterineto, mora indraindray ankehitriny ny mandeha adala miaraka amin'ny profil tokana ary handiso fanantenana ireo singiolary manintona.
Ny lehilahy sasany matetika dia mampifangaro ny tranonkala mampiaraka amin'ny katalaogy mailaka ary mieritreritra fa tsy maintsy "mandidy" vehivavy iray fotsiny. Ireo profiles izay ny votoatiny sy ny fepetra takina dia mikendry iray amin'ny alina iray, ny fifandraisana eo amin'ny lahy sy ny vavy ary ny tsy fitoviana dia mihamaro hatrany. Hatramin'ny androany, saiky ny rehetra no manana fidirana amin'ny aterineto, mihena ny haavon'ireo profil, dia miteny ny vehivavy sasany. Na ny fifanakalozan-tokotany tokana, izay tsy maintsy mandoa ny fampiasana ny serivisy, dia mihena ny haavony ary ny isan'ireo izay mitonona anarana tsy misy sary, dia nipoitra be.
Fangatahana marobe marobe sy sary mahafinaritra ary koa tsy misy profesora matanjaka toy ny hoe: "Tsy mitady na inona na inona aho. Mijery fotsiny aho "dia toa tsy mifanohitra amin'ny lalàna. Ankoatr'izany, na dia eo aza ny fiakarana sy ny trondro maro, ny isan'ny fifandraisana sy ny hahafantarana ireo karazan-tarehy maro dia mety ho avo indrindra eto. Ny olo-malaza manjaitra matetika dia mijery ny rantsantanana eto.
Faharetana, nefa afaka miara-miala voly amin'ny tranonkala mampiaraka!
Matetika ny mpizara vaovao no manembona ny taratasy sy ny famangiana pejy. Ireo mpivady ihany no afaka mahita ny tenany ao anatin'ny arivo tapitrisa miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy monja ho an'ny fifandraisana maharitra, angamba io no anisan'ny tranga mahazatra amin'ny fitsipika.
A sarotra sokajin-taona dia maneho ny 36- ho 45 taona Single, tsy tany tena fiainana. Fa dia azo atao mitovy matetika tafiditra tao amin'ny fianakaviana sy ny fitokisana nahazo na tsy mbola vonona ho amin'ny fihodinana faharoa.
Inona no hatao rehefa lasa tia ny namana akaiky indrindra?
Ho an'ny fikarohana goavana dia tokony ho fantatrao ny hevitrao sy ny fanirianao manokana. Na izany aza dia tsy maintsy manantena ny hifandray amin'ny olona izay mbola tsy nahavita ny tantara taloha. Vetivety dia lasa tsy fantatra ny "stopgaper".
Ankoatra izany, tokony hiomana ny olona iray fa tsy mitovy ny sary eo amin'ny sary eo aminy.
Na izany aza, na dia tsy lazaina aza dia tokony tokony hitondran'ny hafa azy amim-pahamendrehana sy fanajana.
Ny latsa-danja indrindra indrindra dia ny lanjany sy ny taonany. Ankoatra izany, manana olana amin'ny olona ny miaiky ny volon'izy ireo. Ny vehivavy dia tia manambaka ny kilao. Izany matetika no mitranga fa tsy zava-misy, matetika efa 10 taona efa antitra efa antitra no nifanakalozana.
Ny tsy fahombiazan'ny daty voalohany dia tsy azo ihodivirana.
Ny fiainana dia tsy fampisehoana an-tserasera, na tena izy na amin'ny Internet. Raha misy olona mahafantatra izany ka mahafa manararaotra ny asa lehibe kanto ny resaka, fifanakalozana sy mahazo ny mahalala ny tsirairay raha ny isan'ny tokan-tena tao amin'ny tsenam-bola sy ny azo atao, dia mety ho sambatra sy be dia be ny tena traikefa na inona na inona teny an-dalana.
Angamba tokony ho marary kokoa ianao.